နှလုံးသားရပ်ဝန်းမှ အသံများ...။: I Love This Doctor
အီးမေးလ်ထဲက ရလာတဲ့ ရယ်စရာလေးပါ။ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ရယ်စရာလေး ဖြစ်ပါတယ်။ ကျင့်သုံးသင့် မသင့် ဆိုတာကတော့ ချင့်ချိန်ပေါ့နော...။
A: No, not at all. Wine is made from fruit. Brandy is distilled wine, that means they take the water out of the fruity bit so you get even more of the goodness that way. Beer is also made out of grain. So haveacup now and then!
'Life should NOT beajourney to the grave with the intention of arriving safely in an attractive and well-preserved body, but rather to skid in sideways - Chardonnay in one hand - chocolate in the other - body thoroughly used up, totally worn out and screaming 'WOO HOO, WhataRide'!
1. The Japanese eat very little fat and suffer fewer heart attacks than Americans or Australians.
2. The Mexicans eatalot of fat and suffer fewer heart attacks than Americans or Australians.
3. The Chinese drink very little red wine and suffer fewer heart attacks than Americans or Australians.
4. The Italians drinkalot of red wine and suffer fewer heart attacks than Americans or Australians.
5. The Germans drinkalot of beers and eat lots of sausages and fats and suffer fewer heart attacks than Americans or Australians.
ရေးသားသူ Ko Boyz at 1:22 AM
khin oo may May 23, 2009 at 2:14 AM
mae May 23, 2009 at 6:04 AM
Conclusion က အသက်ရှည်ချင်ရင် အင်္ဂလိပ်လို ပြောတာလျှော့ပြီး ဗမာလို များများပြောရမယ်ပေါ့.. ရှည်တော့ကော ဘာလုပ်မှာလဲ
p.s. ဒါမျိုးတင်လဲ ရတယ် ကိုဘ၊ ဖတ်တယ်
khin oo may May 23, 2009 at 7:37 AM
khin oo may May 23, 2009 at 7:38 AM
သိတဲ့အတိုင်း အီးမကောင်းပါ။ သဘေီာသီး .နွားနို့..............အဟင့်။
Nay Lin May 23, 2009 at 11:22 AM
ဒီပို့ဖတ်ပြီးတော်တော်အားရှိသွားတယ်။ အရမ်းကျေးဇူးပဲ ကိုBoyzရေ။ ဒီလိုအားရှိစေမယ့် ပို့တွေများများတင်ပါ
ကြည် May 23, 2009 at 12:17 PM
ဟုတ်ပါ့..အတော်ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ ဒေါက်တာပဲ။ အပြင်မှာတွေ့ဖူးချင်လိုက်တာ..မေးစရာရှိလို့။
မီးမီးချစ် May 23, 2009 at 4:06 PM
Round shape လေးနဲ့ အပြတ်မိုက် အောင် ကြိုးစားလိုက်ပါ့မယ် ဒေါက်တာ
ဝက်ဝံလေး May 23, 2009 at 4:26 PM
မ ခင်ဦးမေ ပြောသလိုပဲ မြန်မာလိုတင်ရင် ပိုအားရမယ် အခုတော့ အင်္ဂလိပ်စာ မြင်ရင် မဖတ်ချင်တာနဲ့ နဲနဲပဲဖတ်သွားတယ် ဘာမှန်းသိပ်မသိလိုက်ဘူး အဟိ ဒါပေမယ့် မန့်သွားတယ်နော် ko boyz လာလည်ဦး ပထမဆုံး လာလည်ပြီးတော့ လာလဲမလည်ဘူး ဘာလဲ ဘလော့ဂ်ဂါ အသစ်လေးကို မကြိုဆိုချင်ဘူးပေါ့လေ ဟုတ်လား
အသစ်ဆိုပြီးတော့ အားမပေးချင်ဘူးပေါ့ ဂလိုလား
ဟိဟိ စ တာနော် လည်လည်လာရင် ပျော်မှာပဲ
သက်ဝေ May 23, 2009 at 4:36 PM
Ko Boyz May 26, 2009 at 10:59 AM
မြန်မာလို ဘာသာပြန် တင်ချင်ပေမယ့် တစ်ချို့ဟာသတွေက အင်္ဂလိပ်လို ဖတ်မှ လုံးစေ့ ပတ်စေ့ အဓိပ္ပါယ် သိနိုင်မှာမို့ ဘာသာပြန် မတင်လိုက်တာပါ။
khin oo may May 30, 2009 at 3:48 AM
ပေါက်: မြိုးက ကျုပ်လဲ လာရော သူလဲ လစ်ရောပဲ...အဲ့လောက်တောင် ကျုပကိုချစ်စရာလားး
28 May 09, 22:34
Boyz: ပေါက်.. ကမ်ပိန်...။
28 May 09, 22:32
ပေါက်: မေ...စာက်ဘီးလဲကျထားတဲ့ အနာမပျောက်သေးဘူးလား
28 May 09, 22:31
Boyz: ဘာဖြစ်လို့ ငိုတာတုန်း။ ငိုရင် သမင်မမျက်လုံးလေးလို လှတယ်ဆိုလို့ ငိုနေတာလား။
28 May 09, 22:29
Mae: မျိုး..တော်တော်နဲ့ ပျောက်မယ်မထင်ဘူး.. သက်တော့ သက်သာပါတယ်
28 May 09, 22:28
Mae: ဟယ်.. ငိုပါနဲ့..
28 May 09, 22:25
Boyz: ရွှေငွေပတ္တမြား ဒီရေအလား တိုးပွားကြပါေ။ မိမိကောင်းမှု အကြောင်းပြု တောင်းဆု ပြည့်ပါစေ။
May Flower: မနက်က ငိုထားရလို့ခုမျက်လုံးနဲနဲ နာပြီး အိပ်ချင်လာပြီ အိပ်တော့မယ်နော အားလုံး
Boyz: ၁၀ခွဲကို အိပ်ပါတော့မည်။ သတ္တ၀ါ အများ ကျန်းမာပါစေ။ ချမ်းသာပါစေ။ လူအချင်းချင်း လှည့်ပတ်ခြင်း ကင်းဝေးကြပါဟေ။ ဘေးရန်ခပ်သိမ်း ရှောင်ခွာတိမ်း ကင်းငြိမ်းကြပါစေဒ။ ရန်သူငါးပါး ဟူသမျှ ကင်းပကြပါဟေ။